५७ स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकृत, कुन प्रदेशमा कति ? - Samudrapari.com
५७ स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकृत, कुन प्रदेशमा कति ?
९३५ पटक हेरिएको
काठमाडौं — सरकारले देशभरका ५७ स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरेको छ । देशभरि कुल ७५३ स्थानीय तह छन् । ‘प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका—२०७४ को अनुसूचि २ मा ५७ स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रमा राखिएको छ ।
आगामी मंसिरमा हुने प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्देशिकाले पिछडिएको क्षेत्र किटान गरेको हो ।